Ameerikaan Taarifa Haaraa Chaayinaa Irra Keesse Hanga Tokko Yeroo Biraatti Dabarsite
Hagayya 13, 2019
Yunaayitid Isteetis meeshaalee Chaayinaa irraa galan hanga tokko irra kaa’amee kan ture dilaala dhibba irraa harka kudhanii kan Prezidaant Doonaald Traamp Fulbaana tokko akka jalqabamu ajajan yeroo isaa dheeressuu beeksiste.
Waajjirri bakka bu’aa daldalaa Yunaayitid Isteetis akka jedhetti hanga Muddee 15tti dilaalli komputera laap taappii, mobaayila harkaa, fi viidiyoo gaamee, kophee fi hucuu irra dilaalli akka hin kaa’amne ta’ee jira.
Haa ta’u malee taarifi haaraan kun amma iyyuu meeshaalee Chaayinaa dhaa galan hedduu irra kan ka’aman ta’uu waajjirri daldalaa Yunaayitid Isteetis beeksisee jira. Meeshaaleen dilaalli irra kaa’amu illee dhiyootti labsdamuuf jira.
Gabaa guddichi Yunaayitid Isteetis kan keessaa guyyoota hedduuf erga kasaaree booda gabaan NY keessaa dhibba irraa harka 1.6n dabalee jira.